Motivation for success :: प्रेरक प्रसंग : कमजोरी लुकाउने हिम्मत
प्रेरक प्रसंग : कमजोरी लुकाउने हिम्मत
प्रकाशित मिति : बुधबार, फाल्गुन ११ २०७८
काठमाडौँ – एक व्यक्ति बारेको समाचार यति प्रख्यात भयो की, त्यो व्यक्तिलाई राजाले मृत्यु दण्ड दिनेसम्मको निर्णयसम्म पुग्न पर्यो । त्यो खबर थियो, ‘एउटा व्यक्तिको अनुहार संसारकै सबैभन्दा खराव छ’ भन्ने ।
मानिसहरूले राजालाई उनको दुःख पाएका कारण यस्तो कुरुप अनुहार भएको बताए । तर राजाले मानेनन् । आफैले यसको छानबिन गर्ने निर्णय गरे। राजाले त्यस मानिसलाई बोलाएर आफ्नो दरबारमा राखे ।
एक बिहान राजा आफैं उसको अनुहार हेर्न पुगे । संयोगवश त्यो दिन व्यस्तताका कारण राजाले खाना खान पाएनन् । त्यो मानिसको अनुहार साँच्चै उदास थियो भन्ने निष्कर्षमा पुगे ।
राजाले जल्लादलाई बोलाएर त्यो व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिन आदेश दियो । राजाको यो आदेश सुनेर मन्त्रीले आश्चर्य चकित भए । ‘महाराज ! यो निर्दोषलाई किन मृत्युदण्ड दिदै हुनुहुन्छ ? राजाले भने, ‘हे मन्त्री ! यो मान्छे साँच्चै दयनीय छ, आज पहिलो पटक उसको अनुहार हेरे, त्यसपछि दिनभर खाना पनि पाइनँ ।’
त्यसमा मन्त्रीले भने, ‘माफ गर्नुहोस् हजुर, यो मान्छेले पनि बिहान सबभन्दा पहिले तपाईंको अनुहार देख्यो। उ पनि अहिलेसम्म भोकै छ ।’ अब तपाईं आफै निर्णय गर्नुहोस् कि को बढी दुःखी छ ।’
राजा स्तब्ध भए, उनले यो कुरा सोचेका पनि थिएनन् ।राजालाई रिसाएको देखेर मन्त्रीले भने, ‘महाराज ! उदास अनुहार कसैको छैन । त्यो भगवानको उपहार हो। दुष्टता हामीले हेर्ने वा सोच्ने तरिकामा हुन्छ। कृपया यो व्यक्तिलाई रिहा गर्नुहोस्। राजाले उनलाई मुक्त गरे।’
अर्को एउटा राजा थिए, जसको एउटा मात्र खुट्टा र एउटा मात्र आँखा थियो। त्यो राज्यका सबै प्रजा खुसी थिए किनभने राजा धेरै बुद्धिमान र राजसी थिए। एकपटक राजाले सोचे कि किन आफ्नो तस्विर बनाउने ?
त्यस देश–विदेशबाट चित्रकारहरू बोलाइयो । ठूला ठूला चित्रकारहरु राजाको दरबारमा आए। राजाले सबैलाई हात जोडेर उनको एउटा अति सुन्दर तस्बिर बनाउन अनुरोध गरे जुन दरबारमा राखिनेछ। सबै चित्रकारहरूले सोच्न थाले कि राजा त अशक्त छ, त्यसो भए उसको तस्बिर कसरी सुन्दर बनाउने ? यो पटक्कै सम्भव छैन । तस्विरलाई सुन्दर नबनाए क्रोधित भएर दण्डित गर्ने हुकुम थियो ।
यो सोचेर सबै चित्रकारहरूले राजाको तस्बिर बनाउन अस्वीकार गरे, त्यसपछि एकजना चित्रकारले पछाडिबाट हात उठाए र भने कि म तपाईको धेरै सुन्दर चित्र बनाउँछु, जुन तपाईलाई पक्कै मन पर्नेछ।
लामो समयपछि उनले एउटा चित्र तयार गरे, जुन देखेर राजा निकै खुसी भए र सबै चित्रकारहरू छक्क परे । चित्रकारले एउटा तस्विर बनाए जसमा राजा भुइँमा एउटा खुट्टा झुकेर बसेका छन् र आफ्नो शिकारलाई एक आँखा बन्द गरेर निशाना गरिरहेका छन्।
त्यो चित्रकारले राजाको कमजोरी लुकाएर सुन्दर चित्र बनाएको देखेर राजा निकै खुसी भए । राजाले उनलाई धेरै इनाम र धन–सम्पत्ति दिए। त्यसोभए हामी पनि किन अरुको कमजोरी लुकाउने, बेवास्ता गर्ने र राम्रोमा ध्यान केन्द्रित नगर्ने।
आजकल यस्तो देखिन्छ कि मान्छेहरु एकअर्काको कमजोरी चाँडै पत्ता लगाउँछन्, हामी आफैमा जतिसुकै खराब किन नहोस तर सधैं अरुको खराबीमा ध्यान दिन्छौं कि यस्तो मान्छे त्यस्तो हो, ऊ त्यस्तै हो।
हामीले नकारात्मक परिस्थितिमा पनि सकारात्मक सोच्नुपर्छ र हाम्रो सकारात्मक सोचले हाम्रा सबै समस्या समाधान गर्छ।